Imisebenzi yePakistani e-UAE 【Iqasha e Dubai nase-Abu Dhabi!]
Umsebenzi kaRhulumente eDubai NgeeNgcebiso
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Disemba 13, 2017
Imisebenzi yePakistani e-UAE
Qala ngeNkampani yokuThengwa e-Dubai
Imisebenzi yePakistan kwi UAE inkampani yethu yahlukile. Kakhulu ibhetele kunezinye iinkampani zesikhokelo kwi-UAE. Ngaphezu koko, inkampani yethu yasekwa kwi2016 kwaye yaseka iinkonzo ezimangalisayo e-United Arab Emirates. Umsebenzi wethu kwinkampani yokufumana amava abacebisi abaqeshwe e Dubai kunye noRH abaqeqeshi bamazwe aseGCC.
dubai Inkampani yeSixeko yenye ye ukukhula ngokukhawuleza kwearhente yaseDubai kuMbindi Mpuma, Asia, kunye Khanada. Nangona oku kunokuba yinyani, ezinye ze Abantu abafuna umsebenzi eAsia basebenzisa inkampani yethu kwi-UAE. Ngaphezulu kwe-80% yabazingeli bomsebenzi ube ngumviwa ophumeleleyo e-Dubai.
Ukusekwa kweAsia Recruit kuhambelana nemfuno kwintengiso yokhuphiswano. Inkampani yase Dubai Ukubonelela ngezisombululo zabasebenzi kubathengi abaninzi abadumileyo. Ukubonelela ngamathuba amakhondo omsebenzi kunye nokukhula kwabagqatswa abaninzi. Inkampani yethu iyathetha ngokubanzi yinxalenye yamaqela akhethekileyo ezinkampani ngaphakathi Dubai City. Ngokunikwa la manqaku, Mbindi Mpuma kunye neAsia yokugaya shishini iiprojekthi ezimangalisayo kwi-UAE. Ngokwenene kunceda abantu abaninzi abafuna ukukhangela imisebenzi e-Dubai nase-Abu Dhabi.
Ngoko ke iinkonzo zethu zokukhangela imisebenzi zenziwe ngokukodwa. Kuphela kunika uncedo ekufuneni umsebenzi kwiDaibhi yaseNdiya. Ngaphantsi kweemeko, inkampani yethu inikezela ngokukhethekileyo imisebenzi kunye neenkampani zase Dubai. Amathuba abazingeli bemisebenzi abanamakhono kwi-UAE abalinde abafuna umsebenzi wasePakistan eMbindi Mpuma.
Layisha kwakhona i-Resume ye-Dubai apha ngezantsi!
Imisebenzi e Dubai kwi Pakistani!
Silindele iCV yakho ebuyekeziwe
I-Dubai ibhetele kwaye iyamangalisa!
Ngokuyinxalenye, inkampani yokuqasha i-Dubai City Company. Uye wabakhonzela abafuna umsebenzi kuphela Imisebenzi yase-Dubai yendawo yemoto. Kodwa njengoko kuye kwaphawulwa ukuba kunjalo ukuqeshwa abafuna umsebenzi behlabathi abavela eNdiya ezibandakanya abafuna umsebenzi eAsia. Abafuna umsebenzi wasePakistan wamkelekile kwi-UAE kwaye thina ngokuqinisekileyo ayikhawulelwanga kwi-UAE kuphela. Kwangelo xesha, sijonge abagqatswa abavela eQatar, China kwaye ngenxa yoko abaphathi abavela eHong Kong. Njengo abafuna umsebenzi eMzantsi Afrika. Ngokudibeneyo ne-USA kunye ne-Singapore. Ukongeza, sinceda ukukhutshwa okuvela eIndonesia. NeMalaysia Abazingeli bemisebenzi bangamkelekanga e Dubai.
Imisebenzi yase Dubai nge ivisa azifumaneki kuphela kubaviwa basekuhlaleni. Ukuba ukhona Ukusuka ePakistan unokufumana isabelo somsebenzi kwi-Dubai City Company. Ngeenjongo zokukhangela umsebenzi eDubai. Iqela lethu eliphanda abagqatswa kwi IUnited Arab Emirates. Kwaye ukubeka abasebenzi basePakistan kwiiNkampani zeSixeko saseDubai. Ngale nto engqondweni, sijonge phambili kukubeka amathuba amatsha eDubai.
IDubai yeyona igqwesileyo indawo ngomsebenzi wehlabathi. Izinga lokungaqeshwa liphantsi kakhulu e-Dubai. Ke kuya kufuneka uzame ukusebenzisa inkonzo yethu kwaye ugqithise ukusuka ePakistan. Xa ufaka isicelo kunye neyethu inkampani unokufumana kalula umsebenzi eMbindi Mpuma. Ukunxibelelana neHR umlawuli kwaye abaphathi beRecruents ngabona baphambili ekufumaneni umsebenzi wengingqi. Ke musa ukuchitha ixesha lakho kwaye layisha kwakhona namhlanje.
Siyinkampani ekhulayo ngokukhawuleza e-UAE
Njengombandela wenyani, thina yenye yeenkampani ezilungileyo kakhulu kwi-UAE. Sikwanjalo I-arhente yokuqesha ilayisenisi ngokupheleleyo eDubai Iqela lethu linamava akhethekileyo kwi-UAE. Abafuna umsebenzi ovela ePakistan abaphandi Imisebenzi yaseGulf. Ngomsebenzi okhethekileyo ukukhangela ukuvunywa kwabantu ePakistan abantu beza uphando lomsebenzi ukuya e-UAE. Ngale nto engqondweni, inkampani yethu izama ukuthumela impahla yabasebenzi. Ukusuka ePakistan ukuya phesheya Isikhokelo sokukhutshelwa eDubai.
Ukukubeka ngenye indlela, iinkonzo zokuqasha i-Dubai City Company. Unika uluhlu uncedo lwengqesho kubantu abafuna umsebenzi basePakistan. Sisebenza kunye neenkampani ezingaphezu kwe6,000 zabasebenzi eDubai nase Abu Abuabi. Iinkonzo zokubekwa isigxina eDubai. Kubalulekile ukuba uqiniseke kwethu Ukufakwa emsebenzini kuya kubandakanya ukuqeshwa ngemvumelwano. Ngokudibana ngokuqeshwa okwethutyana kwiinkampani zalapha eDubai nase Abu Dhabi. Ukongeza, sisebenza kwi ukufunwa kobugqwetha kwamazwe aphesheya kunye nemakethi yeteksi.
Ngeenkonzo ezifanayo zamathokheni ezinikezelwa yinkampani yethu. Ukuqengqeleka ukusuka kwi-Asia encinci ukuya kwiinkampani ze-Emirates. Ukuya kwimibutho emikhulu yamazwe amaninzi kumazwe e-GCC. NjengaseBahrain ngokuqinisekileyo ngeQatar emangalisayo. Wethu Iinkampani zaseDaibhan ziqeshwe ngamashishini athile. Ezifana neoli kunye negesi e Dubai nase-Abu Dhabi. Ngoko imisebenzi e-Pakistani e-UAE ingaba sesandleni sakho.
Nangona oku kunokwenzeka ukuba umsebenzi wezobuchwephesha wolwazi ku-Abu Dhabi. I-Pakistani e-UAE iphezulu eyaziwayo kubazingeli bamakhondo aphesheya. Kwelinye icala, umsebenzi webhanki kunye nezemali ePakistan. Kwakhona, abaphathi abaphezulu bayatholakala e-UAE. Ngaxeshanye, amathuba okunakekelwa kwezempilo e-Dubai kunzima ukufumana. Kodwa kusenokwenzeka ukuba ukukhangela umsebenzi ngokuchanekileyo kukude. Ungasathethi ke ngokuvelisa amathuba asisiseko. Ngokudibeneyo nokwakha kwaye imisebenzi kunye nokuhamba kwimisebenzi e-Emirates.
Ubungqina obuninzi obuyimfuneko kubaviwa abavela ePakistan. Eyona nto ilula kukufumana amathuba eziko lokufowuna. Ungasebenzisa umzekelo Dubai WhatsApp Amaqela. Kukho iindawo ezininzi apho abasebenzi basePakistan bangafakwa khona e Dubai.
Kwicala elibi kufuneka ukhunjulwe. Kakhulu abaviwa abangakumbi abaphupha ngeDubai. Ezi ntsuku sisiya e-Emirates ngokukhethekileyo ngakumbi kwiindawo zeNjineli. Itekhnoloji yoLwazi (IT) imisebenzi e Dubai kwi Pakistani ziyafumaneka ukuba ubhalisela inkampani yethu. Ngale nto engqondweni kwicala elifanelekileyo. Unga fumana ithuba elihle lokuthengisa kunye nokuthengisa Isikhundla seNkonzo yomthengi. Imali kunye nokwenza i accounting kunye neeBhanki ze HR HR kunye nolawulo emsebenzini e Emirates. Ngendlela efanayo, ukuba ufuna umsebenzi ePakistan wena uLawulo oluPhezulu nesiCwangciso soShishino.
Imisebenzi e Dubai ngePakistan
Ngobuchule obukhulu bokunxibelelana kwenethiwekhi. Pakistan abafuna umsebenzi ukuze Companies Dubai. Okokuqala, zidityaniswe nezethu amava obuchwephesha kwintengiso yaseMiddle East. Ngakolunye uhlangothi, sibeke abaphathi bePakistan kwi-UAE. Uninzi lwabacebisi bethu abanamava abaphanda ngemisebenzi eDubai yasePakistan. Imisebenzi ye-Intanethi eDubai akukho lula ukuyifumana. Ukuba uhlala kwelinye ilizwe. Kodwa enye ingongoma ephambili esizimisele ukuyenzela abazingeli bomsebenzi waseAsia. Ukubonelela nge Elona nqanaba liphezulu leenkonzo zokuzingela imisebenzi esekwe kwiinkqubo zemigangatho. Zombini abathengi bamanye amazwe. Ngubani ozinze kwi EMbindi Mpuma kunye ne-Asia kubaqeshi kunye nabafuna umsebenzi.
Ukusebenzisa iinkonzo zethu zeenkampani zasePakistan ukufumana imisebenzi emitsha. Ngokucacileyo uphando kwaye idibanisa neenkampani zokuqesha. Ngaphantsi kwezo meko, abacebisi bethu balawula isiseko sehlabathi. Kwikharhuleyitha nganye elungiselelwe umgqatswa ngamnye kwimisebenzi ayinikelayo. Kwisiphumo sokugqibela sohlalutyo lweenkonzo zethu zokufakwa zokuthengisa ukusuka eAsia ukuya eDubai. Oko kuvumela ukuba sikwazi ukubonelela abathengi bethu imisebenzi emangalisayo e Dubai. Senze zonke izinto eziqwalaselwayo xa umntu ofuna ikhosi enza iprofayile yesiko kwiwebhusayithi yethu. Ndiyacela ulayishe kwakhona as IsiXeko saseDubai sinenkqubo ekhulayo emangalisayo.
Ukubeka abaviwa basePakistan e-Dubai City
Njengoko kuye kwaphawulwa sinika imali yokubuyisela kuwo wonke umviwa. Ngubani ozimisele ukusihlawulela inkonzo kwaye akafumani umsebenzi. Inkonzo yethu eyona nto igcina ixesha lokugcina. Kubaviwa ababini kunye nabaxhasi. Ukubeka ukusuka ePakistan ukuya e-Dubai. Indlela yethu ilula kakhulu kuba kuthunyelwa abaphathi abavela ePakistan baya e-Dubai. Kulula kwaye kuninzi ngakumbi ukususela kwi-2009. Ekuqondeni kwexesha elide kwiimfuno zabaxumi be-Middle East. Kwaye abaviwa abavela kumazwe aphesheya abafuna umsebenzi kwi-UAE. Yilokho esikwenzayo ngakumbi ku-Abu Dhabi.
Ukunikezelwa kwezi ngongoma, izikhono zabaphathi kunye neemfuno namava eMzantsi Mpuma. Uya kuqinisekisa ukuba ukufumana it talent kakhulu kwiSixeko sase-Dubai iinkampani. Sisebenza ngaphakathi kwamacandelo okuthengisa kunye nentengiso e-UAE. Ukuncedisa iinkampani ze-IT ezivela kubaqeshi babafundi eQatar. Sisebenza nabambalwa iinkampani eSaudi Arabia. Ekuqhubekeni, sibeka abantu e-Dubai.
Imisebenzi yePakistan e-UAE - Inkampani yethu inokukunceda ukuba ufumane umsebenzi wasePakistan! Layisha i-CV namhlanje! IDubai sisiXeko seshishini!
Imisebenzi yePakistan e-UAE ungayifumana!
Umgca ophezulu Inkampani yaseDubai City Recruit isuka ePakistan. Ngoku sinceda abathengi kwiinkampani eziwinayo eDubai. Siyiprojekthi yokulawula kunye neenkampani zasePakistan. Kwaye uhlala ujonge iitalente ezivela ePakistan. Abagqatswa bethu abatsha bayaphucuka imisebenzi ngenkonzo engcono kunceda njenge-WhatsApp.! Kubaphathi baseUAE. Akukho nto uvela kuyo.
Kungakhathaliseki ukuba kuphi ezikhoyo ngoku zihlala. Kukho okuninzi amathuba emisebenzi eNdiya abafuna umsebenzi. Ngapha koko abantu base Mzantsi Afrika nkqu neemveliso zaseMelika ziyakwazi fumana umsebenzi. Ke, akukho sizathu sokwenyani. Phantse nawuphi na umntu unokubekwa eDubai. Abantu abatsha banokubekwa e-Emirates, nokuba ungaxelelwa ntoni na. Inkampani yeDubai City Ngokuqinisekileyo ulapha ukubeka abasebenzi abatsha e-UAE. Ngokubanzi, abathengi bethu abaninzi bajonga ezi nkampani ziqeshayo. I-Careerjet kwi-website ye-Dubai kwaye Inkampani yaseMonster Gulf Bafanelekile ukufaka isicelo ngeCV yakho.
Isikhokelo sabaphengululi abakhathalelwayo ePakistan
Imisebenzi eDubai yasePakistan kunzima ukuyifumana. Ke abantu basePakistan bayathanda ukusebenzisa inkampani yethu. Iinkampani eDubai zixabisekile Abasebenzi baseAsia kwaye akukho ngxaki ngeVisa. Sidale Izikhokelo zeDubai kunye nokwazisa ngabazingeli bemisebenzi baseAsia. Abantu abafuna umsebenzi banokusebenzisa ezethu guides eDubai. Imisebenzi yePakistan kwi-UAE inokufumaneka nathi.
Ngakolunye uhlangothi, unako sebenzisa inkonzo yokuqashwa kwefowuni. Zininzi kakhulu ii-expats ezintsha ezizayo eDubai. Ayisosinyanzelo sokufumana umsebenzi, ezinye ze I-expats yeza eDubai. Ukungafumani msebenzi e-UAE. Kungenxa yeso sizathu leenkampani zethu zenza isikhokelo seDubai nolwazi. Ukunceda abo bafuna umsebenzi bafumane umsebenzi ngaphambi kokuya e-Emirates.
Kukho i Isikhokelo esipheleleyo sokuthuthela e-Dubai kwaye ufumane umsebenzi. Abatsha abafuna umsebenzi bafuna nje umsebenzi onzima. Kwaye Inkampani yaseDubai City ilapha ukunceda nawuphi na umntu ovela kwamanye amazwe okhangela umsebenzi. Wethu WhatsApp Amaqela eDubai asebenza kakuhle kuwo wonke umntu. Le yeyona ndlela ifanelekileyo yokubekwa kwi-United Arab Emirates.
Umsebenzi omtsha kwiiGulf Countries
Abasebenzi basePakistan banako fumana umsebenzi kunye negosa ehotele e Dubai. Ke wena njenge-expat ungakhangela umsebenzi kumacandelo aliqela. Kodwa eyona ilungileyo Inkampani ye-TCS yengqesho. Kwelinye icala, ayingobantu baseDubai kuphela abaqeshayo, kuninzi kwamanye amazwe abajonge ukubeka abantu abafuna umsebenzi. Kukho ezininzi iinkampani e-Saudi Arabia ukufumana abafuna umsebenzi.
Sebenza eGulf amazwe ahlawulwe kakuhle. Umzekelo, Imisebenzi ebhanki ehlawulwe kakhulu e Dubai. Kukho amathuba amaninzi abantu abatsha kungekhona kwiGulf kuphela. Kwakhona, ezinye iinkampani zamazwe ngamazwe e-Yurophu nase-US abaqesha kwi-Dubai City. Omnye wezona zikhulu iinkampani eziqeshwe eDaibha yiGoogle. Kukho amazwe amaninzi amaninzi abaqesha izithuba ezintsha.
Indlela ekhawulezayo yokufumana umsebenzi e-Emirates njengento epholileyo. Ngokuqhelekileyo uthetha ukuba Imfundo ye-MBA ukuqalisa umsebenzi. Ngokwenyani, indlela elungileyo kukuba nemfundo yasekhaya. Eyona ilungileyo ivela eDubai okanye kwiYunivesithi yase-Abu Dhabi. Umzekelo ungawufumana umsebenzi eDubai Mall. Isebenza kakhulu kubathengi bamanye amazwe.
Imisebenzi ukuqala njengePakistan eM Dubai
Enye yeyona ndlela ehlakaniphile yokuqalisa umsebenzi kwi-Dubai. Ngokuqhelekileyo uthetha fumana indawo yokuthengisa kwindawo e Dubai. Ngomzuzu kuninzi abasebenzi baseMzantsi Afrika e-Dubai. Ukuqala ukukhangela umsebenzi eDubai sicebisa ngamandla ukuba hamba kudliwanondlebe. Ukuphuma nokuqalisa kwakhona okuhlaziyiweyo kunye nokuthetha nabaphathi bokuqesha kubonakala ngathi licebo elihle.
Ngokomzekelo, iindleko ziyakwazi bafumana umsebenzi njengomfundisi e-Dubai. Ukunika le ngcaciso kufuneka uyazi indlela yokulawula uphando lwakho lomsebenzi. Ngokukodwa kwelinye le indawo engcono abafuna umsebenzi. Kwaye le ndawo ngokuqinisekileyo i-United Arab Emirates. Ngoko, kwisigqibo esifutshane Imisebenzi yePakistani e-UAE uvulekele wena. Imisebenzi ye EPakistan eDubai Isixeko. Ngokubanzi, sikho Ukuqesha eDubai kwintengiso yaseMiddle East. Ngenisa i-CV kwinkampani yethu kwaye ulinde umsebenzi.
Ngoku sisebenzela iMisebenzi e-Dubai!
Ngaba ufuna ukufumana UYobhi e Dubai nangona le nto inokuba yinyaniso sinokukunceda ukuba uqale entsha umsebenzi kwi-UAE kwi-2018!
Inkampani yaseDubai City ngoku ukubonelela ngezikhokelo ezilungileyo zemisebenzi eDubai. Iqela lethu ligqibe ekubeni longe ulwazi ngolwimi ngalunye Dubai idlulisa. Ngoko, ngale ngqondweni, unokufumana izikhokelo, iingcebiso kunye nomsebenzi kwi-United Arab Emirates kunye nolwimi lwakho.